အဆင့်ကူး | RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
Dumlupınarမှအဆင့်ကူး; တူရကီပြည်နယ်မီးရထား၏သမ္မတနိုင်ငံ (TCDD)7။ ဒေသဆိုင်ရာဒါရိုက်တာ Adem Sivri နှင့်အဖွဲ့သည်၎င်း၏ရုံးခန်းတွင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Abdulkerem Abbasoğluသို့သွားရောက်ခဲ့သည်။ ခရိုင်မြို့တော်ဝန်ŞemsettinAkağaç'ınလည်းပါဝင်သည် [ပို ... ]
Afyonkarahisar ရှိခရီးသည်ရထားသဲတင်ပြီးတူးဖော်သောထရပ်ကားကိုနှိပ်ပါ။ ; Afyonkarahisar တွင် TCDD Taşımacılık A.Ş. ပိုင်ခရီးသည်တင်စနစ်သည်သဲသုတ်ထားသောမြေပေါ်သို့ရွေ့လျားနေသောထရပ်ကားတစ်စီးသည်အတားအဆီးမရှိစနစ်တကျဖြတ်ကျော်သည်။ 1 လူတွေဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ [ပို ... ]
Kütahyaရှိ 1 ကုန်တင်ကားပေါ်တွင်လူနှစ် ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့သည်။ ဒဏ်ရာရသူများအားဆေးရုံသို့ခေါ်ဆောင်သွားသည့်အခါဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့များကမတော်တဆမှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဟုဒေသခံများကပြောသည်။ လူတစ် ဦး ၏အခြေအနေသည်ဆိုးရွားကြောင်းသိရှိရသည်။ [ပို ... ]
အဆိုပါခေါငျးများပြား3Kütahyaအမှိုက် Truck ကားဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်
အမှိုက်သရိုက် Truck ကားKütahya3အတွက်လုပ်တဲ့စက်ခေါင်းဒဏ်ရာရခဲ့သည်ကိုကူး။ တစ်ဦးအဆင့်ကိုကူးမတော်တဆမှုမှာအမှိုက်သရိုက်ထရပ်ကား၏ခေါငျး၌ရိုက်ပုတ်ခံရပြီးနောက်Kütahya3ကလူဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအရ, Perla ရပ်ကွက်အတွင်းအနည်းဆုံးအဆင့်ကိုကူးဖြတ်သန်း u.c. [ပို ... ]
Çerkezköy မြို့တော်ဝန် Vahap akai, မွို့၌ရပ်ရွာသူကြီးများအား 10 အလုပ်လုပ်နေ့လယ်စာအတွက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးသူတို့ရဲ့တောင်းဆိုမှုနှင့်ရပ်ရွာသူကြီးများမှနားထောင်ခဲ့တယ်။ Çerkezköy သူအစီအစဉ်နှင့်ပတ်သက်သောကိစ္စများ shared [ပို ... ]
Diyarbakırဌာနခွဲကသမ္မတ Nusret Basmacıအဆိုပါယိုစိမ့်လစဉ်လတိုင်းအဆင့်ကိုကူးမီးရထားပျက်ကျမှုကနေအစပြုသည်ဟုဖော်ပြထားသည်, BTS, သူအာဏာပိုင်များတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးအစီအမံယူသင့်တယ်ဟုပြောသည်။ ယူနိုက်တက်ပို့ဆောင်ရေးအလုပ်သမားများသမဂ္ဂ (BTS) Diyarbakir [ပို ... ]
မတော်တဆမှုအတွက် Mersin ၏တာရှုမွို့ခရိုင်၏ညဉ့်နေစဉ်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့သည်သောရထားခုနှစ်, ကုန်တင်ရထားငါ၏တန်း4ကျမ်းပိုဒ်များတွင် hit သောကားကိုဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ Yunacıkပေါ်မတော်တဆ sequence ကို 22.15, Yenice ခရိုင်လမ်းမကြီး၏အစီရင်ခံစာများအရ, ညဉ့် [ပို ... ]
TCDD Afyonkarahisar7။ အပြည့်အဝ Auto ပြင်ဆင်မှုနှင့်အတူအခမဲ့အဆင့် Crossing Barrier စနစ်နှင့်ကင်မရာတွင်ထည့်သွင်းဖြစ်ကြောင်း5အပိုင်းပိုင်းပိုမိုလုံခြုံဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ရထားလမ်းလိုင်းပေါ်ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှုနယ်နိမိတ်။ TCDD [ပို ... ]
အဆိုပါ TCDD လက်ထောက်Yavuzyılmazဖို့အဆင့် Crossing သတိပေးခြင်းတုံ့ပြန်
တာဝန်များ၏ဖော်ပြချက်ဖိတ်ခေါ်မည်သည့်မတော်တဆထိခိုက်မှု, Zonguldak မြူနီစီပယ်နှင့်အဝေးပြေးကားကိုရှောင်ရှားဖို့လာမယ့် TCDD အတွက် Zonguldak မြူနီစီပယ်Yavuzyılmazပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ဖြတ်၏ CHP Zonguldak ဒုတိယဝန်ကြီး, တုံ့ပြန်မှု TCDD ထံမှလာ၏။ အဆိုပါအဆင့်ကိုကူး [ပို ... ]
အဆိုပါလမ်းဆုံမှာလမ်းပေါ်အန္တရာယ်များမှအာရုံစူးစိုက်မှုကိုဆွဲ၌တရားလာမယ့် Zonguldak ၏မြူနီစီပယ်, ရထားလမ်းနှင့်အတူ Bulent Ecevit Caddesi အပြိုင်ဖို့တည်ရှိသော CHP Zonguldak လက်ထောက်Yavuzyılmazပင်လယ်, အာဏာပိုင်များ task ကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ Zonguldak ၏အလယ်ဗဟိုတွင်Yavuzyılmaz, [ပို ... ]
သံလမ်းကို TCDD ADANA6ပြုလုပ်လိမ့်မည်။ ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှု6ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှု ဦး စီးဌာနသည်ပြည်သူ့ ၀ ယ်ယူရေးဥပဒေပုဒ်မ 4734 အရအဆင့်ဖြတ်ကူးရာတွင်ရော်ဘာဖုံးအုပ်ထားခြင်းကိုဖွင့်ထားသည်။ [ပို ... ]